Blog Label တွေကို scrollBar နဲ့လုပ်နည်း - .::just for share::.
Home » ဘလော့ဆိုင်ရာ » Blog Label တွေကို scrollBar နဲ့လုပ်နည်း
Blog Label တွေကို scrollBar နဲ့လုပ်နည်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်နည်းလေးကိုသိပြီးသားလူများလဲရှိမှာပါ...မသိသေးသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ... ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နည်းလေးကတော့ Blog Label တွေကို scrollBar နဲ့လုပ်နည်း ဘဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
Blogger.com ကို Sign In ၀င်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Layout ကိုသွားပါ။
Layout ကနေ Labels ကိုသွားပါ။
ပြီးရင် Edit မှနေပြီး Title ကိုမိမိကြိုက်တဲ့နာမည်နဲ့ပြင်ပါ။ပြီးရင်တော့ Save ပေါ့။(ကျွန်တော်ကတော့ by mmitshare လို့ပြင်ပါတယ်...ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ html ကုဒ်ရှာတဲ့အခါမှာရှာရလွယ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်...Labels အတိုင်းထားလို့တော့ရပါတယ်..ဒါပေမယ့် html ကုဒ်တွေရှာတဲ့အခါ Labels တွေအများကြီးပေါ်လာပြီးရှာရခက်မှာစိုးလို့ပါ...)
ပြီးရင်တော့ Template ကိုသွားပါ။
ပြီးရင် Edit HTML ကိုနှိပ်ပါ။
html code တွေရှိနေတဲ့ အကွက်ထဲကို mouse နဲ့ တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ctrl +fကို နှိပ်ပါ search box ပေါ်လာပါမယ်။
Search box ပေါ်လာရင် ကျွန်တော် အပေါ်မှာပြင်ခဲ့တဲ့ Labels Title ( by mmitshare ) ကို ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင် .....
<b:widget id='Label3' locked='false' title='by mmitshare' type='Label'>
အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တွေ့ရင်အဲ့ဒီအောက်မှာအောက်ကပေးထားတဲ့ကုဒ်ကို copy ကူးထည့်လိုက်ပါ...
အနီရောင်ဖြင့် 300 လို့ပြထားတဲ့နေရာမှာကြိုက်သလောက်ထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။များလာရင် scroll bar က ရှည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးရင် Save Template ကိုနှိပ်ပြီး Save လိုက်ပါ...
၀ဘ်ဆိုက်မှာ ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ scrollbar လေးနဲ့ ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ....
ပြီးရင်တော့ စောစောကရှာရခက်မှာစိုးလို့ Labels နေရာမှာ by mmitshare လိုပြောင်းထားတာကို ကိုယ်ထားချင်တဲ့နာမည်ပြန်ပြောင်းထားနိုင်ပါတယ်...အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ...